Sideen u helaa dhabarka dambe ee dib u celinta?
Haddii aad wali ka yaaban tahay sida loo helo dib-u-celin tayo leh leh websaydh sare PR, markaa waxaan hubaa inaad ugu dambeyntii tahay meesha saxda ah. Sideen u heli karaa dib u celin PR oo ah? Hoos waxaa ku qoran inaan soo koobo kooban oo ku saabsan sadexda, gaar ahaan kuwa ugu fiican, boggagaaga si aad u hesho dhammaan wixii aad u baahan tahay - si deg deg ah, si fudud, oo aanad bixin hal dollar. Aniga ahaan, waxaan aaminsanahay in bogagga soo socda (YouTube, Wikipedia, iyo Google Plus) ay yihiin meelaha ugu fiican ee lagu heli karo dib u celinta PR.
Xasuusnow, si kastaba ha ahaatee, si ka duwan sida dhismaha xiriirka caadiga ah ee dareenkiisa caadiga ah, helitaanka back-up PR waa mid aan fududeyn. In kastoo aanay u baahnayn in la walwalo - hawshu waa gebi ahaanba la isku halayn karo, marka la eego xaqiiqda - jenis jenis judi di indonesia. Sidaa daraadeed, aan ka wada hadli laheyn shabakadaha tayada sare leh hal mid. Websaytka Google Plus Social Pages
Isticmaalka bogga intarnetka ee Google Plus ayaa ah midka ugu fudud ee weli wali ah hab cadaalad ah oo lagu heli karo qaar sareeya. Dib-u-celinta PR ee goobtaada. Dhamaan waxaad u baahan tahay halkan waa kaliya oo la wadaagayo boostada blogka si loo siiyo Google backlinks oo leh awoodda ugu sareysa ee soo noqota. Looma baahna in la sheego in YouTube ay maamulaan Google waa bogga labaad ee adduunka ugu caansan, oo leh tirsi booqasho maalinle ah ka dib dhibcaha maalinlaha ah ee maalinlaha ah. warshad raadin weyn oo lafteeda ah. Sidaas, video this martigelinta online waa meel fiican si aad u hesho back-sare PR - si fudud by uploading video ah. Oo maskaxda ku hayso in Youtube lagu yaqaano dhibcaha maamulka domain ee 100-ka buuxa 100. Ma aha xumaan, haa? Marka, adigoo adeegsanaya adeegga si aad u hesho tilmaan tayo sare ah, waa in aad si fudud u gashaa youtube. gal, sii wad fiidiyowga fiidiyowga bogga internetka, iyo soo afjar adigoo ku dhejinaya sharaxaadda fiidiyowga adigoo u adeegsanaya gadaal. Wikipedia, The Encyclopedia Free
Wiki ayaa si fiican loogu yaqaanaa inuu yahay kan ugu caansan online-ka ah ee fedraaliga ah.Waxaa sidoo kale la yiraahdaa inuu yahay mid si buuxda u madaxbannaan oo ujeedo leh, loola dhaqmo oo lagu cusbooneysiiyo tabarucidda. Iyadoo la tixgelinayo awoodda domainka ee heerkeedu sarreeyo (100 dhibcood 100), oo leh dib-u-celin heer sare ah oo ka socota Wiki waxay si weyn u kordhinaysaa kalsoonida iyo kalsoonida boggaaga gaarka ah.
Asal ahaan, waxaa jira laba siyaabood oo ikhtiyaari ah oo dib loogu soo celiyo halkaas, laakiin wax waliba si dhaqso ah ayuu u burburin karaa marka ay timaaddo caddaynta dhabta ah. Waxaan loola jeedaa in badanaa dadka isticmaala codsanaya cadeyn toos ah ka hor inta aan la daabicin edbinta. Taasi waa sababta dhabarkaaga dib u dhac u dhici karto maalmo yar ka dib sababtoo ah caddaynta noocan oo kale ah. Waa kuwan sida aan u dhaqmeyno. Marka hore, adigoo abuuraya bog cusub oo shabakadda Wiki ah, ku hayso marxaladda qabyada ah adigoon daabicin, waxaadna heli doontaa gadaal.
Ikhtiyaarka labaad ee aan isku dayey naftayda ayaa la shaqeynaya bogga qaarkood ee Wiki, inkastoo aan caan ahayn. Qodobka ugu muhiimsan ee halkan ku yaala waa in wax kasta oo caddayn buuxa oo buuxa ay tahay wax aan macquul ahayn. Sidaa darteed, qaybta libaax ee aan bogagga caanka ah ahayn marwalba waa la iska indhatiray. Waxaan soo jeedinayaa inaanu isticmaalno halkaa wax u gaar ah - si sahlan oo aan u dhigno xiriirinta tilmaamaysa boggaaga internetka. Dhab ahaan, taasi way sameyn doontaa.